Ingabe amaplanethi amancane futhi aneziphi izici | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kuwo wonke umhlaba kukhona amaplanethi nezinkanyezi eziningi ngaphandle kwalokhu esikubona ku uhlelo lwelanga. Iminyaka ekhanyayo kude kunezinye izinhlobo zokuphila ngezinga elikhulu noma elincane elifana nelethu. Kodwa-ke, isikhala sakhiwa ngezinto eziningi kunamaplanethi nje. Kukhona uhlobo lwenkanyezi olubizwa ngokuthi Amaplanethi amancane.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi iyini iplanethi emifushane nokuthi ihluke kanjani kwiplanethi ejwayelekile.
1 Ayini amaplanethi amancane
2 Imigomo yamaplanethi amancane
3 Amaplanethi amancane wesistimu yelanga
4 Amaplanethi amancane amancane
Ayini amaplanethi amancane
Amaplanethi amancane, njengoba igama lawo liphakamisa, amaplanethi amancane kunalawo ajwayelekile. Azikho izibalo zikakhonkolo, kepha ziphakathi nendawo kwamaplanethi ajwayelekile kanye nawo wonke amanye ama- ama-asteroid. Lokhu kudonswa okuyisisekelo kubhekwa njengenchazelo ejwayelekile kepha akuyona inqubo lapho iplanethi ihlukaniswa njengeplanethi encane.
Ukuhlukanisa i-astro njengeplanethi encane, kudingeka lezi zidingo ezilandelayo:
Kufanele babe semjikelezweni ozungeza ilanga.
Okukhulu kakhulu kufanele kube kukhulu ngokwanele ukuze amandla adonsela phansi uqobo anqobe amandla omzimba oqinile. Okungukuthi, inesimo esiyindilinga noma i-hemispherical.
Akuyona i-satellite yenye iplanethi.
Lapho inkanyezi ifinyelela ezingeni elithile lokuziphendukela kwemvelo iba nomthelela ekulweni nezinye izinkanyezi. Bangakwazi ukugeleza ngezindlela ezahlukene. Okokuqala, kungenzeka ukuthi idonse zonke izinkanyezi ezizungezile. Okwesibili ungabasusa kude nomjikelezo wabo noma ubasonte kuwo. Endabeni yamaplanethi amancane akwenzeki lokhu, futhi kubangela ezinye izinkanyezi ukuthi zincike kuzo endaweni ezungeza ukuzungeza kwazo.
Imigomo yamaplanethi amancane
Kulezi zindlela esizibalile, okuwukuphela kwento ehluke kakhulu kunamaplanethi ajwayelekile eyokugcina. Lokho wukuthi, amaplanethi osayizi abavamile anendawo enkulu ngokwanele ukuba abe namandla okwenza izinkanyezi ezizungezile zishintshe indlela yazo. Kuphakathi kokuthi uyasondela kubo, hamba kude noma ubenze bavule kubo.
Umehluko omkhulu phakathi kweplanethi enosayizi ojwayelekile neplanethi yemifino ncamashi yilokhu. Iplanethi yemifino ayinayo amandla okwenza izinkanyezi ezizungezile zishintshe umzila wazo. Njengokulangazelela, lawo maplanethi angaphezulu komjikelezo we Neptune se bamazi njengo-plutoid.
Amaplanethi amancane wesistimu yelanga
Kuhlelo lwethu lwelanga kunamaplanethi amahlanu amancane. Sizohlaziya ukuthi obani amagama abo nezimpawu zabo eziyinhloko:
ICeres: kuyiplanethi eyatholakala ngo-1801 futhi itholakala phakathi kwemizila ye- Mars y I-Jupiter. Ekuqaleni, kwakuthathwa njengenkanyezi enomsila kodwa ekugcineni kwaziwa njengeplanethi encane. Isisindo siyingxenye eyodwa kwezintathu kuphela zebhande eliphelele le-asteroid. Ububanzi bayo bungamakhilomitha angama-950 × 932. Kunjengokungathi kwakuyiplanethi elingana nebanga elikhona lapho unqamula iSpain ubheke phezulu. Le planethi inamanzi ngaphakathi kanti ukuba khona kwayo kwatholakala ngo-2014.
PlutoYize iPluto ibiyingxenye yamaplanethi asayizi ojwayelekile wesimiso sonozungezilanga, lapho kuchazwa incazelo yeplanethi enkulu yasehlobo, uPluto wawela kakhulu kulesi sigaba. Yatholwa ngo-1930. Itholakala eduze kakhulu nomjikelezo weNeptune. Inobubanzi bamakhilomitha angama-2370, okulingana nengxenye eyodwa kweziyisithupha yobubanzi beplanethi yethu. Ibuye ibe nongqimba lwamanzi aneqhwa nomoya onombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Eris: Le planethi encane itholwe muva nje. Ububanzi bayo bungaphansi kobukaPluto. Ingenye yalezo zeqembu elibizwa ngePlutoid, ngoba itholakala ngemuva komjikelezo weplanethi iNeptune. Ingena ebhandeni leKuiper.
Makemake: le planethi yatholwa ngo-2005 futhi ingenye yezinto ezibucayi. Ingenye yezindawo ezinkulu kunazo zonke kulo lonke ibhande leKuiper. Cishe yingxenye yePluto.
I-Haumea: itholakala futhi kubhande leKuiper futhi ibhekwa njengePlutoid. Yatholwa ngo-2003. Inesimo esiyisiyingi.
Ngenxa yelukuluku, kulinganiselwa ukuthi kunamaplanethi amancane angaba ngu-200 ebhandeni laseKuiper. Lokho kungukuthi, yize kwakukhona amaplanethi amaningi amancane awatholakala ngaphakathi kwesistimu yethu yelanga.
Amaplanethi amancane amancane
Ngaphezu kwamaplanethi amancane asibonile, kuneqembu lamaplanethi okuthiwa amaplanethi amancane amancane. Lezi zinkanyezi azihlukanisiwe njengamaplanethi amancane kodwa ziyabhekelwa ukuze zifakwe esikhathini esizayo. Ebhandeni leKuiper nje kunabantu abalinganiselwa kwabangu-200 abangaqokelwa ukhetho. Ngaphandle kwesifunda sesistimu yelanga kungahle kube nabalinganiselwa ababalelwa kwabangu-10.000 XNUMX.
Lokho abaningi abakucabangayo futhi abakucabangayo iqiniso lokuthi kungani iPluto yayingasathathwa njengeplanethi ngo-2006. Isizathu esikhulu sokuhamba UPluto wayethi ayihlangabezani nezidingo zesine zokuba yiplanethi. Iqiniso lokuthi ayikwazi ukuthonya ezinye izinkanyezi ezisizungezile alikwenzi kube yiplanethi.
Ososayensi abaningi abavumelananga ngalesi sinqumo ekuqaleni. Nanamuhla, kusenempikiswano evulekile yokuthi ngabe iPluto kufanele ibhekwe njengeplanethi futhi noma cha. Ngemuva kokutholwa kwephenyo leNew Horizons IPluto yaziwa ukuthi ineziphuphutheki ezinhlanu nomoya owodwa. Leli qiniso liwenza ube namandla anele amandla futhi uthonye umzila wezinkanyezi ezizungezile, ngakho-ke kungathathwa njengeplanethi.
Njengoba ukwazi ukubona, ukuhlukaniswa ngaphakathi kwamaplanethi wendawo yonke kungaba yinkimbinkimbi impela. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngamaplanethi amancane futhi usondele kancane kubukhona bendawo yonke.Ucabanga ukuthi iPluto kufanele ibhekwe njengeplanethi entsha noma ukuthi ihlala iyiplanethi encane njengoba ibhekwa namuhla?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Amaplanethi amancane